Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ)
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) ကဘာလဲ။
အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု ဆိုတာ ကူးစက်မှု တစ်ခုခုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အရေပြား တုံ့ ပြန်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မပြင်းထန်ပါဘူး။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှားပါးပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အရေပြားဓါတ်မတည့်မှုပုံစံ တစ်မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ပါးစပ်၊ လိင်အင်္ဂါများ သာမက မျက်လုံးများ အထိပါ ထိခိုက်စေပြီး အသက်အန္တရာယ်ဆုံးပါး တဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ပြင်းထန် အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပြင်းထန် အရေပြားဓါတ်မတည့်မှုရောဂါဟာ ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်း တစ်ခုတစ်လေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆေးတွေကတော့ –
sulfonamides, tetracyclines, amoxicillin နဲ့ ampicillin တို့လို ပဋိဇီ၀ ဆေးတွေ၊
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်အရေပြားကို ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အရေပြားဓါတ်မတည့်မှု နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အန္တရယ် အခြေအနေတွေ ရှိခဲ့ဖူးသလားဆိုတာကို မေးပါလိမ့်မယ်
Erythema multiforme (အယ်ရီတီးမား မာတီဖောင်မီ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို ကုသဖို့အတွက်-
ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကုသဖို့ အတွက်-
ရောဂါထိန်းချုပ်ရန် Intravenous immunoglobulins (IVIG) ဆေး
http://www.nhs.uk/conditions/erythema-multiforme/Pages/Introduction.aspx. Accessed October 16, 2017.
http://www.nytimes.com/health/guides/disease/erythema-multiforme/overview.html. Accessed October 16, 2017